Herbalife tsara sa ratsy? Eto daholo - Fahasalamana
iTunes tsy mahalala iphone mac
iTunes niraikitra tamin'ny fanamarinana rindrambaiko iphone nohavaozina
maninona aho no avelao hanavao ny app-ko
aiza ny wifi miantso amin'ny iphone
misintona appstore ho an'ny iphone 6
Herbalife tsara sa ratsy? Eto daholo
Herbalife Es Bueno O Malo
Tsara sa ratsy ny Herbalife? Fanontaniana mahazatra io. Ka tsara ve sa ratsy ny Herbalife? Betsaka ny lafy tsara kokoa noho ny ratsy. Vonona ny hanomboka amin'ny Herbalife ve ianao? Ny tanjoko dia ny hizara ny sasany amin'ireo antony maro hanombohana ny Herbalife.
Tombony amin'ny vokatra Herbalife amin'ny fihenan'ny lanja
Herbalife vokatra very lanja dia natao hanolorana fomba fiaina mahasalama kokoa. Ny fandaharan'asan'izy ireo mampihena ny lanjany dia tena mora arahana ary manolotra karazana fanoloana sakafo sy fikororohana hifanaraka amin'ny tsiro tsirairay.
Mora raisina ny famenon-tsakafo, ny fikororohana, ny tsakitsaky ary ny bara proteinina.
Ny fanaraha-maso tsara ny fihinanana matavy sy kaloria dia manampy anao hihinana tsara sy hiaina salama.
Ny vokatra Herbalife dia vita amin'ny soja. Ny vokatra fanoloana sakafo avy any soja, miaraka amin'ny fiovan'ny fomba fiaina, dia hita fa manampy amin'ny fihenan'ny lanja sy mampiseho fanatsarana ny fari-pahaizana amin'ny vatana amin'ny olona matavy loatra (1), (2).
Ny proteinina soja dia iray amin'ireo mpiorina lehibe indrindra amin'ny fikorontanan'ny sakafo Herbalife (3). Voalaza fa hanatsara ny fahasalaman'ny kardia, na dia betsaka aza ny fanadihadiana ilaina hanaporofoana izany (4).
Ny fatiantoka ny vokatra famoizana herbalife
Ny vokatra Herbalife dia misy fatiantoka vitsivitsy ihany.
Ny vokatra dia mety ho lafo be raha oharina amin'ireo vokatra mampihena ny lanjany hafa eny an-tsena misy vokany mitovy.
Araka ny tolo-kevitry ny OMS, 5% fotsiny amin'ny kaloria totalinao no tokony avy amin'ny siramamy (5). Na izany aza, betsaka ny siramamy ao Herbalife Meal Replaces ary mihoatra io fetra io.
Herbalife dia mamokatra bara proteinina sy fikorontanana mahasalama, famenon-tsakafo manokana ary tsakitsaky mba hanovana ny fahazarana mihinana sakafo tsy mahasalama. Na izany aza, tsy misy porofo ankehitriny fa misy vokany tsara amin'ny fahasalamanao ireo vokatra ireo.
Nisy ihany koa ny porofo tamin'ny lasa fa Herbalife dia nanao famenon-danja amin'ny famoizana lanja dia misy akora mampidi-doza.
Ny ankamaroan'ny vokatra Herbalife dia misy ireto akora telo ireto izay mety hitera-doza amin'ny fahasalamanao:
Kafeinina Ny sasany amin'ireo vokatra mampihena ny lanjan'ny Herbalife dia misy kafeinina, satria manentana ny metabolism (3). Saingy misy vokany manimba maro ny kafeinina. Mampitombo be ny tosidra (6). Ny kafe iray grama dia misy kafeina 63 mg (7) eo ho eo. Ny dite, tablety, ary famenon-tsakafo Herbalife kosa dia misy kafeinina isaky ny mihinana. Ireo vokatra ireo dia mety hampidi-doza ho an'ny olona tsy mahazaka kafeinina koa. Noho izany, tsara ny mijery ny marika momba ny vokatra ao amin'ireo akora.
Proteinina na soja Ny fihovan'ny proteinina sy ny zava-pisotro proteinina dia zava-dehibe raha ny fihenan'ny lanja no jerena. Ny vokatra Herbalife dia misy phytoestrogens (estrogen azo avy amin'ny zavamaniry) izay misy fiatraikany amin'ny fahasalamana sy fitondran-tena (8). Ary koa, ny olona sasany dia tsy mahazaka fatra betsaka amin'ny proteinina.
hazan-dranomasina : Araka ny voalazan'i Herbalife, maro amin'ireo vokatra mampihena ny lanjany no misy akorandriaka. Ny hazan-dranomasina dia misy voangory, mussel, foza ary hantsana. Raha tsy mahazaka an'ireto ianao dia zahao ny lisitry ny singa alohan'ny hanafarana vokatra.
Betsaka ny fanadihadiana natao no nitatitra fa mety hampidi-doza ny atiny (9), (10) ny fandraisana fanampim-panafody Herbalife.
Tatitra momba ny vokatra Herbalife voapoizin'ny bakteria Bacillus subtilis izay niharan'ny fahasimban'ny atiny (11).
Ireo vokatra ireo dia mihetsika amin'ny famonoana ny fahazotoan-komana amin'ny famonoana ny hanoanana ary mampihena ny fihodinana voajanahary-mahavoky anao. Mety hiteraka tsy fahampiana ara-tsakafo izany.
Raha bevohoka ianao na mampinono, dia mihevera mitady toro-hevitra amin'ny dokotera alohan'ny hanombohana karazana fandaharana mampihena ny lanjanao. Ireto zava-pisotro sy kapsily fisotroana atao dokambarotra amin'ny fahitalavitra sy an-tserasera ireto dia tsy mampitandrina anao velively ny amin'ny voka-dratsin'izy ireo amin'ny fahasalamanao. Noho izany dia tokony ho fanapahan-kevitrao raha te hampiasa fitaovana tsy mahasalama ianao na sakafo ara-pahasalamana ary manao fanatanjahan-tena hampihenana ny fahakiviana be loatra.
Ny fihenan-danja amin'ny herbalife - inona no vokany?
Ny sakafo maraina lehibe indrindra amin'ny sakafo maraina dia ny sakafo maraina. Manomboka ny metabolismanao ary mitazona anao ho feno mandra-pisakafoanana atoandro. Na izany aza, maro ny sakafo maraina dia tsy misy gliosida sy proteinina ampy.
Herbalife Formula 1 Shake dia misy fifangaroana gliosida, proteinina ary vitamina mitovy amin'ny sakafo mahasalama. Atsipy ny metabolismanao tsy mila fihinanana sakafo tsy ilaina. Na izany aza, ny kaloria isaky ny mahatratra an'io fanetsiketsehana io dia tsy ampy hanefana ny takiana isan'andro. Ity fihintsanan'ny kaloria / proteinina avo lenta ity dia manampy anao hanary lanja kely sy hisotro rano iray litatra miaraka aminy manampy amin'ny famoahana poizina amin'ny fampitomboana ny vokatra mivoaka. Aza miantehitra be loatra amin'ny famenon-tsakafo ahitra satria raha tsy mandray intsony ianao dia afaka mamerina ny lanjany very.
Afaka manampy anao hihena ve izany?
Ny sakafo Herbalife dia natao hanampiana ny olona hampihena ny lanjan'izy ireo amin'ny alàlan'ny fampihenana ny fihinanana kaloria amin'ny fihoviana hanoloana sakafo ary hampiakarana ny metabolisma miaraka amin'ny famenony.
Tsy mbola nisy fanadihadiana natao momba ny fandaharam-pampihenana ny lanjan'ny Herbalife manontolo, fa ny fihovan'ny fanoloana sakafo kosa dia toa manampy amin'ny fihenan-danja.
Ahintsana ny fanoloana ny sakafo Herbalife
Ny sakafo tsirairay (scoops roa na 25 grama) an'ny Herbalife Meal Replacement Shake Mix dia misy ( 1 ):
Tavy: 1 grama
Karbohidraty: 13 grama
Fibre: 3 grama
Sugar: 9 grama
Proteinina: 9 grama
Rehefa afangaro amin'ny ronono skim 8 grama (240 ml) ny mix dia manome kaloria 170 isaky ny sakafo ary natao ho soloina sakafo ambany kaloria.
Amin'ny ankapobeny, ny fikororohana fanoloana sakafo dia afaka manampy anao hihena rehefa ampiasaina hatramin'ny 1 taona ( 2 , 3 ).
Raha ny marina, ny fikarohana dia milaza fa mety hahomby kokoa amin'ny fihenan-danja mandritra ny fotoana fohy izy ireo noho ny sakafo nentin-drazana ambany kaloria ( 4 ).
Fianarana iray ihany, tohanan'ny Herbalife, no nanandramana manokana ny fahombiazan'ny horohoron-tany Herbalife.
Ity fandinihana ity dia nahitana fa ny olona izay nisolo sakafo 2 isan'andro niaraka tamin'ny herbalife dia nihena 5 kilao teo ho eo tao anatin'ny 12 herinandro ( 5 ).
Tsy ampy ny fikarohana momba ny tombontsoa maharitra amin'ny fihoviana fanoloana sakafo, fa farafaharatsiny ny fanadihadiana iray dia nanoro hevitra fa afaka manampy amin'ny fisorohana ny lanjany mandritra ny taona maro ( 6 ).
Ny fanadihadiana faharoa dia nahitana fa ny olona nampiasa fanoloana sakafo dia mihozongozona mandritra ny 3 volana alohan'ny hifindrana amin'ny sakafo ambany kaloria ambany dia ambany ny lanjany taorian'ny 4 taona noho ireo izay tsy nisakafo ihany ( 7 ).
Amin'ny ankapobeny, ny fikarohana dia manolo-kevitra fa ny fikororohana fanoloana sakafo dia afaka manampy ny olona hampihena ny lanjany ao anatin'ny fotoana fohy, saingy mety mila paikady fanampiny momba ny sakafo sy fomba fiaina hampihena sy hitazomana ny lanja mandritra ny fotoana maharitra.
Soso-kevitra fanampiny ao amin'ny programa Herbalife mampihena ny lanjany dia misy:
Multivitamin Formula 2: multivitamin mahazatra misy mineraly isan-karazany ho an'ny sakafo ankapobeny.
Cell activator Formula 3: fanampin-tsakafo misy asidra alpha lipoic, aloe vera, pomegranate, rhodiola, hodi-kazo ary resveratrol izay milaza fa manohana ny fitrohana ny otrikaina, ny metabolisma ary ny fahasalaman'ny mitochondrial.
Mifantoka amin'ny dite hena: fifangaroana zava-pisotro vovoka mifangaro amin'ny dite sy kafeinina izay natao hanomezana angovo fanampiny sy hanohanana antioxidant.
Fanaraha-maso tanteraka: famenon-tsakafo misy kafeinina, sakamalao, karazana dite telo (maintso, mainty ary oolong), ary ny hoditr'ampongabendanitra izay milaza fa mampitombo angovo.
Cell-U-Very: famenon-tsakafo misy electrolytes, fitrandrahana landy katsaka, persily, dandelion ary faka asparagus natao hampihenana ny fihazonana rano.
Snack Defense: famenon-tsakafo misy chromium sy Gymnema sylvestre nalaina izay milaza fa manohana ny metabolisma gliosida.
Aminogen: fanampin-tsakafo misy anzima protease, izay voalaza fa manatsara ny fandevonan-kanina ny proteinina.
Na dia misy akora marobe aza ireo fanampin-tsakafo ireo ary milaza ho manampy amin'ny angovo, ny metabolism ary ny fihenan-danja, tsy mbola nisy fanadihadiana natao hanaporofoana ny fahombiazany.
Ho fanampin'izany, ny famenon-tsakafo dia tsy fehezin'ny masoivohon'ny governemanta momba ny kalitao na ny fahadiovana, noho izany dia tsy misy antoka azo antoka fa misy ireo akora nambara.
Ny fanoloana sakafo roa isan'andro amin'ny horohoron-tany Herbalife dia mety hitarika fihenan-danja mavesatra, saingy tsy fantatra na manana fanampin-tsakafo fanampiny ireo ampahany amin'ny programa.
Ho fanampin'ny fanampiana anao hampihena ny lanjanao, ny programa Herbalife dia manana tombony vitsivitsy.
Mora sy mety izy io
Ny horohoron-tsakafo dia toy ny fampiasa amin'ny sakafo Herbalife dia mety hanintona ny olona sahirana na tsy manam-potoana na liana amin'ny fahandro.
Mba hanaovana ilay fanetsiketsehana dia ny afangaro amin'ny vovo-dronono 2 sotrokely miaraka amin'ny ronono skim 8 grama (240 ml) ary ny fankafizana no ilaina fotsiny. Ny vovoka dia azo afangaro amin'ny ranomandry na voankazo ihany koa ho an'ny fisotroana endrika malama.
Ny fisotroana malama fa tsy mahandro dia mampihena be ny fotoana lany amin'ny fikarakarana, ny fiantsenana ary ny fanomanana sakafo. Ny programa Herbalife dia mora ihany koa ny manaraka.
Ny savony miorina amin'ny soja dia mety ho tsara amin'ny fonao
Ny mpiorina indrindra amin'ny ankamaroan'ny fikorontanana sakafo Herbalife dia ny proteinina soja mitoka-monina, karazana vovoka proteinina izay avy amin'ny soja.
Ny fikarohana sasany dia milaza fa ny fihinanana proteinina soja dia afaka mampihena ny tahan'ny kolesterola sy mampihena ny risika amin'ny aretim-po ( 8 ).
Na izany aza, mila 50 grama isan'andro mba hanatanterahana ireo vokatra ireo ( 9 , 10 ).
Ny servisy roa an'ny Herbalife Meal Replacement Shakes dia tsy misy afa-tsy 18 grama, noho izany dia ilaina ny mampiditra sakafo soja fanampiny amin'ny sakafonao ( 1 ).
Misy raikipohy tsy misy soja sy ronono
Ho an'ireo izay manana allergy na fahatsapana ny soja na ny rononon'omby, Herbalife dia manolotra fikolokoloana fanoloana sakafo hafa vita amin'ny pea, vary ary proteinina sesame ( 1 ).
Ity vokatra ity dia natao ihany koa tamin'ny akora tsy novaina tamin'ny génétique, ho an'ireo maniry hisoroka ny GMO.
Ny sakafo Herbalife dia mety sy mora harahina, ary ny fikororohana avy amin'ny soja dia mety hampihena ny risika amin'ny aretim-po aza. Ho an'ireo izay mora tohina na tsy mahazaka soja na ronono dia misy fomba hafa.
Hatsarao ny fahaizan'ny asa
Ny vokatra Herbalife dia mampitombo ny haavon'ny angovo ao amin'ny vatana. Ilay olona aorian'ny fihinanana ny fihintsanan'ny proteinina Formula 1 amin'ny maraina dia afaka miasa mora foana mandritra ny andro. Ny fahaizan'ny olona miasa dia ampitomboina amin'ny alàlan'ny fampiasana vokatra samihafa. Ny fampiasana proteinina dia manome vitamina ilaina, izay manatsara ny asan'ny faritra amin'ny vatana.
Mampifandanja ny haavon'ny kolesterola
Herbalife dia sedraina amin'ny alàlan'ny fizotrany maro. Voaporofo fa ambany kolesterola izy ireo. Ny olona manana olana amin'ny fikorianan'ny rà dia afaka mampiasa mora foana ireo vokatra ireo. Ny fisian'ny kolesterola ambany ambany amin'ny vokatra dia mampiseho fa salama amin'ny vatan'olombelona izy ireo.
Mampitombo ny fahasalaman'ny fo
Manankarena proteinina ny vokatra Herbalife. Ny sôkrôzy soja dia manome ny asidra amine ilaina amin'ny vatana. Mampitombo ny fahasalaman'ny fo ireo asidra amine ireo. Ny vokatra Herbalife dia mitazona ny tahan'ny kolesterola, izay mampitombo ny fahasalaman'ny fo koa.
Ampitomboy ny metabolisma
Ny vokatra Herbalife dia misy kofehy ara-tsakafo. Ny fampiasana ireo vokatra ireo dia mamaha olana amin'ny fandevonan-kanina maro. Ny fivontosana dia azo vahana amin'ny fampiasana ireo vokatra ireo. Ny fampiasana ireo vokatra ireo dia manakana ny bakteria sy ny viriosy tsy hanafika ny làlam-pandevonan-kanina. Ireo vokatra ireo dia misy otrikaina mahasoa izay mamorona fisaronana ao amin'ny tsinay.
Fehezo ny lanja
Herbalife Formula 1 dia fanoloana sakafo feno. Betsaka ny vokatra ampiasain'ny olona hampihena ny lanjany. Tena ilaina ny proteinina sy ny fibre. Ny vokatra Herbalife dia be proteinina ary tsy misy tavy. Ny fibre dia mampitombo ny metabolisma. Ilaina ny proteinina mba hamolavolana ny vatana mahia. Afaka mitsidika koa ianao my Herbalife Africa South hianatra momba ny fandaharam-pampihenan-danja.
Fomba fihinanana sakafo mahasalama ny fihinanana suplementaires Herbalife. Afaka mankafy sakafo feno ianao amin'ny savoka iray fotsiny. Afaka mankafy tombony maro ianao amin'ny fampidirana voankazo ho an'ny malama.
Ataovy madio ny sakafonao
Ny sakafo mahavelona nomen'ny vokatra Herbalife dia ahafahanao mamaly ny filanao ara-tsakafo. Tsy ilaina ny sakafo be. Ny vokatra vita amin'ny ronono Herbalife dia misy fibre ilaina amin'ny vatanao. Ireo fibra ireo dia mitazona ny làlam-pandevonan-kanina ho salama. Hitandrina ny fanirianao sakafo maivana izany. Ny zava-pisotro misy ronono ao amin'ny vokatra Herbalife dia manatsara ny metabolisma ary manalavitra anao amin'ny sakafo tsy mahazatra.
Mampitombo ny tanjaky ny taolana
Ny vokatra Herbalife dia tsy mifehy ny lanja fotsiny, fa manome mineraly sy vitamina ihany koa. Atleta maro no mampiasa ny tsipika fanatanjahantena Sport. Ny kalsioma dia hita ao anaty malama. Raha mandatsaka sakafo roa isan'andro amin'ny sakafo ianao ary manomboka mampiasa servisy roa amin'ny herbalife miaraka amin'ny sakafo iray isan'andro, dia ho tsara endrika ianao. Hampahery ny taolanao io. Ny kalsioma dia mineraly ilaina amin'ny fitomboan'ny taolana.
Manampy amin'ny detoxification.
Ny vokatra Herbalife dia manampy ny vatana hilentika. Manatsara ny fivoahana ary mamela ny vatana hamoaka fitaovana tsy ilaina. Izy io dia vita amin'ny alàlan'ny votoatin'ny fibre izay ao anatin'ny fihororohana.
Ny vokatra Herbalife dia manan-karena proteinina sy gliosida. Ireo otrikaina ireo dia manome angovo fanampiny. Izy ireo dia mitazona anao feno hery sy tanjaka.
Fanoloana zava-pisotro hafa
Izy io dia fanoloana kafe iray kapoaka misy ronono na coke hatsiaka. Ireo zava-pisotro ireo dia ampiasaina hanomezana fahafaham-po anao fotsiny. Tsy afaka manome tombony anao izy ireo. Ny siramamy amin'ireo zava-pisotro ireo dia mampitombo ny kaloria ao amin'ny vatanao. Etsy ankilany, ny vokatra Herbalife dia misy tsiro maro. Ny fisian'ny fructose amin'ny vokatra dia tsara ho anao. Ireto zava-pisotro mahafinaritra ireto dia tsy mila hohanina raha manana Herbalife shakes ianao. Azonao atao koa ny manampy ranomandry na voankazo hampitomboana ny tsiro ary hankafizanao tombony bebe kokoa.
Alohan'ny hanombohana ny programa fampihenana ny lanja dia tokony handalina ny antsipirian'ny proteinina shake ianao. Ny horohoron-tany maro dia tsy mifanaraka amin'ny vatana. Halalino ireo fangaro ary manomboa mampiasa azy ireo raha tsy mahazaka azy ireo ianao.
Raha atleta ianao dia tokony handany ny horohoron-tany Herbalife mandritra ny 20 minitra farafahakeliny.
Fanoloana sakafo ny vokatra Herbalife. Raha mampiasa ireo vokatra ireo ianao dia tokony manatona ny mpahay siansa momba ny sakafo an-tserasera na izay mpahay sakafo alohan'ny hidirany.
Ny vokatra Herbalife dia tsy atolotra ho an'ny vehivavy bevohoka na mampinono. Satria ny vehivavy bevohoka dia tsy afaka mandingana na dia sakafo iray aza.
Ny fampanjifana maharitra dia tsy soso-kevitra satria mitondra any amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Tokony handray ny torohevitry ny manam-pahaizana ianao amin'ny fotoana hanombohana ireo vokatra ireo.
Ratsy ny fihoaran'ny zava-drehetra. Ny vokatra Herbalife dia manome ny otrikaina ilaina rehetra azonao avy amin'ny voankazo sy legioma, saingy ireo vokatra ireo dia tsy tokony hampiasaina isan'andro. Lasa mahazatra ny olona iray ary afaka miala amin'ny vitamina voajanahary.
Na dia mahomby amin'ny fihenan-danja haingana aza ny vokatra Herbalife dia tsy maharitra io fihenan-danja io. Ny tombotsoany amin'ny fahasalamana maharitra dia tsy voaporofo, ary fanadihadiana maro no milaza fa manimba ny aty izy ireo. Noho izany, torohevitra ny hiresaka amin'ny dokotera alohan'ny hanombohanao ireo fanafody manampy amin'ny fihenan-danja.
Miovaova izy io. Misy horohoron-tsakafo Herbalife sasany misy ronono, ny sasany kosa tsy.
Misy firaka ve ny vokatra Herbalife?
Araka ny marika momba ny sakafo mahavelona ireo vokatra ireo dia tsy misy firaka ny vokatra Herbalife.
Ankatoavina ve ny Herbalife FDA?
Ny famenon-tsakafo dia tsy mila fankatoavana alohan'ny fivarotana. Na izany aza, manaraka ny torolàlana rehetra an'ny FDA ny Herbalife rehefa manamboatra ny vokatra.
Ratsy ve ny mihinana sakay mandritra ny fitondrana vohoka
Tsara ve ny mihinana oatmeal amin'ny alina? Eto daholo